နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အဓိက သယံဇာတအင်အားသည် ပြည်သူလူထုသာဖြစ်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိ? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အဓိက သယံဇာတအင်အားသည် ပြည်သူလူထုသာဖြစ်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိ?
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အဓိကသယံဇာတ အင်အားသည် ပြည်သူလူထုသာဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များပြုစုစောင့် ရှောက်ရန် ကလေးပြုစုရေးဌာန(နေပြည်တော်) အဆောက်အအုံ ရတနာပန္နက်တော်တင်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။ ထို့အပြင် သယံဇာတများအတွင်းမှ ကလေးငယ်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပညာသင် ယူစေချင်ပါက မှန်ကန်သည့် စံနမူနာထားများထားပေးရန် လိုအပ်ပြီး လူကြီးများအနေနှင့် မမှန်ကန်သည့်အပြုအမူမရှိရန် အရေးကြီး ကြောင်း သိရသည်။
”ပြောတာကတစ်မျိုး ပြောပြီးလုပ်တာ ကတစ်မျိုး လုပ်တာဆိုရင် ကလေးတွေစိတ်ထဲမှာ ရှုပ်ထွေးသွားမယ်။ လေးစားမှုလဲပျက်မယ်။ ယုံကြည်မှုလဲပျက်မယ်။ ကလေးတွေကို တိုး တက်စေချင်ရင် ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက တိုးတက်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေ လိုနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အဓိကသယံဇာတ အင်အားဆိုတာက ပြည်သူလူထုပါပဲ။ အနာဂတ်အတွက် ကလေးငယ်များဟာ ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဘဏ်ထဲမှာစုထားတဲ့ငွေတွေလိုပါပဲ။ အနာဂတ်မှာ အချိန်မရွေး ထုတ်သုံးနိုင်တဲ့ အင်အား တွေဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးငယ်များကို ကျောင်း သွားချင်စိတ်ရှိဖို့ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး ကျောင်းများမှာလည်း တန်ဖိုးရှိသည့်ကျောင်း များဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
”ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့တန်ဖိုးကို တွက်တဲ့အခါမှာ ပထမဦးဆုံး ဘာကိုအလေးထား လဲဆိုတော့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက ကျောင်းကိုလာချင်တဲ့စိတ် ရှိရဲ့လားဆိုတာကို အရေးထားပါတယ်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား တွေက ကျောင်းကိုမလာချင်တဲ့စိတ် အများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကျောင်းသည် အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကျောင်းတစ်ခုဟာ ပြင်ပအားဖြင့်ကြည့်ရင် ဘယ်လောက်ပဲ နွမ်းဖတ်နေပါစေ၊ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ မပြည့်စုံနေပါစေ ကလေး တွေက အဲဒီကျောင်းကိုသွားရတာ ပျော်တယ်ဆိုရင် ဒီကျောင်းဟာ အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုလို့ ရပါတယ်”ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။
ကလေးငယ်များအနေဖြင့် ကျောင်းသွား ၍ပျော်ပါမှ ကျောင်းတွင်သင်သည့်စာများကို သေချာသင်ယူခြင်း၊ နှလုံးသွင်းခြင်း၊ တစ်ဘဝ စာလုံးတန်ဖိုးထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ ”ဆရာ၊ ဆရာမများဟာ ကျောင်းသူကျောင်း သားတွေအပေါ်မှာ တကယ်ကို စေတနာရှိ မယ်ဆိုရင်၊ တကယ့်ကို ကျောင်းသူကျောင်း သားတွေရဲ့ ရှေ့ရေးကို စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေက မပျော်စရာအကြောင်းမရှိပါ ဘူး။ ကျောင်းမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေထည်ဝါ ဖို့၊ ခမ်းနားဖို့က အဓိကမဟုတ်ဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ကျောင်းသားတွေကို ကျောင်း နေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လောက်လုပ် ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ အဓိကကျပါတယ်”ဟု ပြောသည်။